लकडाउनमा घरमा नै बसेका रोजगारवालाहरुको तलब के हुन्छ ? यस्तो भयो सहमति – Online Nepal
April 21, 2020 479
काठमाडौं। लकडाउनले उद्योग-व्यवसाय नै ठप्प भएपछि उद्योगीहरुले ५० प्रतिशत तलब कटौतीको तयारी गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त बैठक बसेर प्रारम्भिक रूपमा लकडाउनको अवधिमा ५० प्रतिशतमात्रै तलब दिनेगरि सहमति अगाडि बढाउँदैछन्। तीन वटा व्यवसायिक संगठनले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति ट्रेड युनियनहरु समेत सहमत भएका छन्। तीन वटा व्यवसायिक संस्थाले नेकपा र कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनसँग परामर्श गरेका थिए।
परामर्शमा दुवै संगठन आधा तलब कटौती गर्न सहमत भएका हुन्। लकडाउनको अवधिमा ५० प्रतिशत तलब दिने रोजगारदाताको प्रस्ताव मान्न सकिने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। मजदुर र उद्योगीभन्दा सबै मिलेर कोरोना भाइरस रोगको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगको प्रकृतिका आधारमा तलब दिनुपर्ने उनले बताए। ‘सबैमा एकै प्रणालीमा नियमभन्दा उद्योग हेरी तलब प्रदान गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘संचालनमा रहेका उद्योगले पूरै तलब दिनुपर्छ।’ लकडाउनको अवधिमा पनि खाद्यान्न, औषधि, ग्यास उद्योग, खानेपानीका प्लान्ट सहज रूपमा संचालनमा छन्। ती उद्योगले कर्मचारीलाई पूरै तलब दिनुपर्ने श्रेष्ठले जिकिर गरे।
श्रेष्ठले भने धेरै नाफा गरिरहेका उद्योगले पूर्ण रूपमा पारिश्रमिक दिनुपर्छ। कतिपय उद्योगले चैतको समेत तलब नदिएको बताउँदै उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा दिने भनेपछि पनि अटेरी गर्न नपाउने बताए। ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले लकडाउनको अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने विषयलाई स्वीकार्ने बताए। उनले औपचारिक रूपमा छलफल नभएपनि रोजगारदाताले गरेको निर्णय मान्ने बताए।
‘कोरोना संक्रमणले सबैलाई तहसनहस पारेको छ। यो कठिन अवस्थामा हामीले उद्योग९व्यवसायलाई पनि बचाएर लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘मजदुरलाई तलब नै दिन्न भन्न पाइँदैन। वर्षौदेखि काम गरिरहेका मजदुरलाई पनि बचाउने र उद्योगलाई पनि बचाउनेगरि निर्णय गर्नुपर्छ।’ तीन व्यवसायिक संस्थाले ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिनेगरि प्रक्रिया अघि बढाए पनि केही व्यवसायीले भने असहमति राखिरहेका छन्। ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएर पूर्ववत् अवस्थामा आउँदा पनि केही व्यवसाय खुल्न सक्ने देखिएको छैन। त्यस्ता व्यवसायले कर्मचारीलाई कसरी तलब दिन्छन् रु,’ केही व्यवसायीले असहमति राखेका थिए, ‘कुनै व्यवसाय बन्द गरेर कर्मचारी कटौंतीसम्मको सुविधा पनि दिनुपर्छ।’
बैठकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र तहसनहस भएकाले यसमा सबै पक्षले ब्योहोर्नेगरि निर्णय गर्ने बारे पनि छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार लकडाउनको अवधिभर सरकार, रोजगारदाता र मजदुर तीनै पक्षले केही ब्योहोर्ने गरि तलब व्यवस्थापन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो।
Prevउदयपुरमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ, थप परीक्षणका लागि धरान पठाइयो
Nextअमेरिकामा मृ*त्यु भएका १२ नेपालीको लाश यस्तो हालतमा
बेलायतमा कोरोनाबाट नेपाली महिलाको नि*धन, ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ९ पुग्यो
भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
काठमाडौं छिर्न झन कठिनाइ, गृहले लागू गर्‍यो यस्तो नियम